အာဏာရှငျစနဈကို ဘယျတော့မှသှေးမအေးပဲရတဲ့နညျးနဲ့ တျောလှနျမယျ ဒါကြှနျမရဲ့နိုငျငံပျေါထားတဲ့သစ်စာတရားလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ မွနှငျးရညျလှငျ – Maythadin
ပရိတျသတျကွီးရေ…ဇာတျလမျးတှဲမြားစှာရိုကျကူးရငျး ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုတဈခဲနကျရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးခြောဟာဆိုရငျမွနှငျးရညျလှငျပဲဖွဈပါတယျနျော။
မွနှငျးရညျလှငျဟာဆိုရငျ သူမပါဝငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲတိုငျးကို ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျအခိုငျအမာရရှိပွီး အနုပညာလမျးကွောငျးကိုအောငျမွငျမှုတှနေဲ့လြှောကျလှမျးလာနိုငျတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော.
မွနှငျးရညျလှငျက မာယာလှညျ့ကှကျဇာတျလမျးတှဲမှာ ဒျေါဟနျနီခြိုကာရိုကျတာကို အံဝငျဂှငျကသြရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို ထပျမံသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျ။
မွနှငျးရညျလှငျရဲ့ထူးခွားတဲ့ရုပျရညျဟာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့မိခငျကွီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးဆုကွညျနဲ့ရုပျရညျခွငျးဆငျတာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေပိုမိုခဈြခငျနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ.။
သူမဟာဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနမှော ပွညျသူလူထုနဲ့အတူရပျတညျခဲ့တာဖွဈပွီး နှဦေးတျောလှနျရေးရဲ့လူထုလှုပျရှားမှုမှတကျကွှစှာနဲ့ပါဝငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။
လူထုလှုပျရှားမှုမှာတကျကွှစှာပါဝငျခဲ့တဲ့သူမကို ပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှငျ့အရေးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီလိုအရေးယူခွငျးခံနရေတဲ့မွနှငျးရညျလှငျက လကျရှိမှာဆိုရငျ လုံခွုံရေးအရအခွားတဈနရောမှာရှောငျတိမျးနရေတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
ဒီတဈခါမှာဆိုရငျလညျးမွနှငျးရညျလှငျက လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျတော့မှာသှေးအေးမသှားပဲအခှငျ့အရေးရရငျရသလို
အဲ့ဒါကတော့ “ဒီလိုအခြိနျမှာ ကမြကိုလူသိဖို့မသိဖို့ like မြားဖို့မမြားဖို့ follower တိုးဖို့မတိုးဖို့ထကျ ကမြရဲ့ပုံတဈပုံစာတဈကွောငျး ပို့ဈတဈခုကနေ လူတဈယောကျပဲရရ ဘယျနှဈယောကျပဲမွငျမွငျ အဲ့လူတှအေတှကျ နစေ့ဉျနတေို့ငျးသှေးမအေးသှားဖို့ဖွဈတယျ
အခှငျ့အရေးရရငျရသလိုဘယျနညျးနဲ့မဆို အာဏာရှငျကိုဖီဆနျနတေယျ ရတဲ့နညျးနဲ့တျောလှနျနသေေးတယျဆိုတဲ့စိတျပဲကမြခေါငျးထဲရှိပါတယျ ဒါကမြရဲ့နိုငျငံအပျေါထားတဲ့သစ်စာတရားပါပဲ” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..။
သူမရဲ့နိုငျငံတျောအပျေါထားရှိတဲ့ ပွတျသားတဲ့စိတျဓာတျကို ပရိတျသတျတှလေညျး အားပေးခြီးကြူးထားတာကိုတှမွေ့ငျရပါတယျနျော…။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျ တဟျယောကျခငျြးစီတိုငျးကို ကြေးဇူးအထူးပဲတငျရှိပါတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာရိုက်ကူးရင်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောဟာဆိုရင်မြနှင်းရည်လွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မြနှင်းရည်လွင်ဟာဆိုရင် သူမပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရရှိပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လျှောက်လှမ်းလာနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.
မြနှင်းရည်လွင်က မာယာလှည့်ကွက်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဒေါ်ဟန်နီချိုကာရိုက်တာကို အံဝင်ဂွင်ကျသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြနှင်းရည်လွင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိခင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်နဲ့ရုပ်ရည်ခြင်းဆင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကပိုမိုချစ်ခင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
သူမဟာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူမကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူခြင်းခံနေရတဲ့မြနှင်းရည်လွင်က လက်ရှိမှာဆိုရင် လုံခြုံရေးအရ အခြားတစ်နေရာမှာရှောင်တိမ်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်းမြနှင်းရည်လွင်က လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှာသွေးအေးမသွားပဲအခွင့်အရေးရရင်ရသလို အာဏာရှင်ကို ဖီဆန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူမချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လေးနက်တဲ့သစ္စာစကားဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်…။
အဲ့ဒါကတော့ “ဒီလိုအချိန်မှာ ကျမကိုလူသိဖို့မသိဖို့ like များဖို့မများဖို့ follower တိုးဖို့မတိုးဖို့ထက် ကျမရဲ့ပုံတစ်ပုံစာတစ်ကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုကနေ လူတစ်ယောက်ပဲရရ ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲမြင်မြင် အဲ့လူတွေအတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသွေးမအေးသွားဖို့ဖြစ်တယ်
အခွင့်အရေးရရင်ရသလိုဘယ်နည်းနဲ့မဆို အာဏာရှင်ကိုဖီဆန်နေတယ် ရတဲ့နည်းနဲ့တော်လှန်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲကျမခေါင်းထဲရှိပါတယ် ဒါကျမရဲ့နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားပါပဲ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပရိတ်သတ်တွေလည်း အားပေးချီးကျူးထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်နော်…။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ် တဟ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။